Bodo sy Njakatiana : fanatanterahana nofy ny “Mifampitantana” | NewsMada
Bodo sy Njakatiana : fanatanterahana nofy ny “Mifampitantana”
Tsy hijanona ho nofy intsony… Hotanterahina araka ny tratra ny hetahetan’ny rehetra, mandritra ilay fampisehoana “Mifampitantanana”, hotontosain’i Njakatiana sy i Bodo, ny alahady 18 febroary ho avy izao.
“Sehatra ho an’ny nofy, izay iarahana manatontosa izy ity. Misy ny soritra napetrak’i Jack Thierry ka samy nitondra ny hetaheta ao anatin’izany izahay sy ny mpikarakara”, hoy ny nambaran’i Bodo, nandritra ny fihaonana tamin’ny mpanao gazety, omaly.
“Haka endrika fampivadiana mozika ny seho. Samy eo an-tsehatra avokoa ny tarika roa tonta hatramin’ny farany. Ny sehatra kosa no hiavaka amin’ny efa fahita, satria toy ny mizara telo izany, ka ny andaniny avy ho an’ny tarika tsirairay ary ny eo afovoany kosa hisy anay mianadahy. Eo afovoan’ny lapa ireo sehatra ireo, mba samy hahita avokoa ny rehetra”, hoy kosa ny fanazavana nomen’i Njakatiana.
“Ny hetahetan’ny mpankafy no ezahin’ny Live Prod hotanterahina. Efa nisy ny “Mifampitantana” voalohany, niarahan’i Bodo sy i Poopy, ka ity indray ny andiany faharoa. Efa amam-bolana izahay no tsy miato anaty fanomanana”, hoy kosa ny fanazavana nomen’i Tantely, avy ao amin’ny Live Prod.
Tsiahivina fa tamin’ny taona 2000 no nisy ity fiarahana an-tsehatr’i Njakatiana sy i Bodo ity. Haverina amin’ny endriny miavaka izany, anatin’ny ora efatra tsy ankiato. Nisy ny sombiny tanaty famerenana, nahenoana an’i Njakatiana manao ny hiran’i Bodo, sy ny mifamadika amin’izay…